Izindatshana zika-Anthony Bergs Martech Zone |
Imibhalo nge U-Anthony Bergs
U-Anthony ungumphathi wephrojekthi ku- Ababhali Ngehora lapho esebenzisa khona amasu ahlukile nawenziwe ngezifiso ukumaketha kahle amabhizinisi amaklayenti akhe. Ukungabi nesikhathi noma ukuthambekela kokubhala iphepha lakho? Zama insizakalo yethu yokubhala yobuchwepheshe bese uvumela isisindo sehle kusuka emahlombe akho! Sizokusindisa amahora wokudideka kanye nengcindezi ngokwenza umsebenzi wengonyama kuwe.
Amaphutha aphezulu ama-5 okufanele uwagweme ku-Marketing Automation
Lwesibili, Disemba 13, 2016 NgoLwesithathu, uDisemba 14, 2016 U-Anthony Bergs
Ukuzenzekelayo kokumaketha ubuchwepheshe obunamandla ngendlela emangalisayo obuguqule indlela amabhizinisi enza ngayo ukumaketha kwedijithali. Kwandisa ukusebenza kahle kokukhangisa ngenkathi kunciphisa ngaphezulu kokuhlobene ngokwenza ngokuzenzakalela izinqubo zokuthengisa nezokumaketha eziphindaphindwayo. Izinkampani zabo bonke osayizi zingasizakala ngemishini ezentengiso futhi zisheshise kakhulu isizukulwane sabo sokuhola kanye nemizamo yokwakha sha. Izinkampani ezingaphezu kuka-50% sezivele zisebenzisa i-automation yokumaketha, futhi cishe ama-70% wabasele bahlela ukukwenza